Nihodina 36 androany i Super Mario, hankalazana ity misy lisitry ny lohateny avy amin'ny tsara indrindra ka hatramin'ny ratsy indrindra - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Super Mario Mihodina 36 Androany, hankalazana Ity misy lisitry ny Lohateny avy amin'ny tsara indrindra amin'ny ratsy indrindra
Super Mario Mihodina 36 Androany, hankalazana Ity misy lisitry ny Lohateny avy amin'ny tsara indrindra amin'ny ratsy indrindra
by Trey Hilburn III Septambra 12, 2021 453 hevitra
Izaho io, Mario tokoa. Ny plumber kely dia mankalaza ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany faha-36 anio amin'ny 13 septambra. Ny Nintendo mustachio'd Mario teo aloha dia efa nisy efa ela. Mazava ho azy, mba hahatonga antsika hahatsapa ho antitra. Shigeru Miyamoto no maestro majika ao ambadik'i Mario sy ny zavaboariny ary raha tsy misy azy, aiza no hisy ny filalaovana?
Nintendo ary ny voalohany Super Mario Bros. no vavahady fidirana amin'ny lalao ho an'ny kiddos sy ny sisa. Hatramin'izao dia mbola mivarotra ihany i Mario rehefa navoaka ny lohateny vaovao. Mazava ho azy, ny anton'izany dia ny lalao, tena lehibe sy manavao fotsiny. Tianay ny zazalahy kely sy ny akanjo ivelany rehetra misy azy. Raha tsy misy azy aho dia tsy haiko raha ho lasa gamer manokana aho.
Raha te hankalaza dia manao lisitry ny Mario anaram-boninahitra manomboka amin'ny tsara indrindra ka hatramin'ny ratsy indrindra. Ireo dia tsy miankina amin'ny avo lenta sy ny ambany indrindra amin'ny franchise. Ity lisitra rad ity dia natambatra tamina tranonkala iray izay mikaroka Internet ary manangona lisitra miorina amin'ny lohateny ankafizin'ny internet.
Tsy handainga aho, maro amin'ireo filaharana ireo no mifanitsy amin'ny safidiko manokana.
Ny lisitry ny Mario toy izao ny lohateny ankafizin'ny kely indrindra:
6 World Super 3D XNUMXD + Fahatezeran'ireo mpanafika
7 World Super Mario 2: Nosy Yoshi
8 World Super Mario 3D Vaovao
10 Super Mario Land 2: Vola volamena 6
12 Tany Super Mario
12 Super Mario Bros. U
14 Super Mario Bros.: Ny ambaratonga very
15 New Super Mario Bros. 2
16 Super Mario 3D Tany
Ahoana no mampitaha an'ity lisitra ity amin'ny safidinao manokana? Ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra ary mazava ho azy fa aza adino ny miarahaba tratry ny tsingerintaona nahaterahan'i Mario!